Wasiir Sacad oo Ka Hadlay Dawlada Itoobiya Oo Walaac Ka Muujisay Saldhig Millatari OO Somaliland Siinayso Dalka Imaraadka Carabta.
(Hadhwanaagnews) Wednesday, January 11, 2017 16:34:45
Hargaysa(HWN)Wasiirka Wasaarada Arimaha Dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire oo maanta qaybo ka mid ah Saxaafadda kula hadlayay magaalada hargaysa ayaa cadeeyay in dalka imaraadka carabtu inuu Somaliland soo waydiistay saldhig millatari in laga siiyo magaalo xebeedka berbera,waxaana uu sheegay in saldhigaasi ay walaac ka muujiyeen dalka itoobiya.
Sacad ayaa tilmaamay heshiiskaas dawlada imaraadku ku doonayso in saldhig millatari lasiiyo uu dhaqan gali doono marka uu madaxwaynaha Somaliland heshiiskaasi gorfayn iyo wada xaajood dabadeed qalinka ku dug golaha baarlaamaanku waajibaadkooda sharci ka gutaan.
“waa run oo ay jirtaa in dawlada Imaraadku Saldhig millatari ina waydiisatay,warkaasina waa war caam ah oo lawada ogyahay oo dhawr jeerna laga wada hadlay dalka imaraadkuna waa dal aynu
saaxiibo nahay oo saaxiibaduna way is waydistaan saldhigyo millatari taas oo go’aanka saldhigaasi ay iska leeyihiin madaxwaynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo labada gole baarlaman ayaa iska leh,go’aanka uu madaxwaynu ka gaadhana waxa uu la qaybsan doonaa baarlamaanka.
Intaas waxa uu ku daray wasiir sacad cali shire oo hadalkiisa siiwata.”walaahi dawladu marka ay arin waddo afkaar badan ayaa lays dhaafsada oo laga jeediyaa,waxaan kaliya oo anigu hubaa arin kasta oo ay dawladu samayso in ay u aragtay danta ummadda.
Dhinaca kale waxa uu ka hadlay walaac lasheegay in dawlada itoobiya ka qabto saldhigaasi millatari ee dalka imaraadka laga siinayo berbera ayaa waxa uu wasiir sacad ku dooday.
“kolay labadaasi wadanba waa laba waddan oo aynu saaxiibo nahay kolay saldhigyadda millatarigu warwarkoodana waa leeyihiin iyo manfacoodaba inaga Somaliland ahaan waxa inoo yaala sidii aynu labada wadanba u ilaashan lahayn,kolay sidaan kuu sheegay itoobiya waa wadan badda ka xidhan imika waxa ay isticmalaan dekeda jabuuti oo kaliya qorshaha kalena waxa weeyaa in ay berberna isticmalaan,markaas wax kasta oo saamaynaya marinada ay la leeyihiin badaha kolay saamaynteeda ayay leedahay.
Sacad ayaa sidoo kale faaqiday suldaan abi bakar wabar oo hore kooxo ciidan ah dibada ula baxay isla markaasna shegay inuu Somaliland diidan yahay oo haddana dib u soo cusboonaaday waxaana uu yidhi.
“kolay warkaasi waa uu jiraa meel uu ka yimid iyo cida uu u socdo toona lama hayo inagu hore ayaynu uga wada hadalnay itoobiya in aanay xuduudkeeda soo galin cida inaga soo horjeedaa sida aynaan inaguba u ogolayn,markaas waxaan rajaynayaa in heshiiskaas aynu galayn ee ku salaysnaa inaan cida xuduudkeeda laga soo weerarin taasna in ay fuliyaan ayaa rajaynayaa.